मकवानपुरमा अनौठो जीवः एउटाको मूल्य १० लाखसम्म ! – Saurahaonline.com
मकवानपुरमा अनौठो जीवः एउटाको मूल्य १० लाखसम्म !
हेटौंडा, बैशाख ३१ । मकवानपुरको पर्यटकीय गन्तव्य चित्लाङ हरेक सम्भावनाले भरिपूर्ण छ । उक्त भेग कृषि, पशुपालन र पर्यटकीय दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंबाट करिब ६० किमी पश्चिम दक्षिणमा अवस्थित चित्लाङमा यस्तो अनौठो जनावर पनि पालिएको छ, त्यसबारे कमैलाई मात्र थाहा होला । जिल्लाको थाहानगर–१०, मा पर्ने बिसिङ्खेलमा यस्तो जनावर पालिएको हो ।
झट्ट हेर्दा उक्त जनावर ऊँट जस्तो देखिन्छ भने नियालेर हेर्दा भेंडा र घोडाको प्रजाति जस्तो देखिन्छ । घाँटी र टाउको ऊँटको जस्तै छ । यसको हिंडाई पनि ऊँटजस्तै छ । रौं हेर्दा भेंडा जस्तो देखिन्छ । पुच्छर भने घोडाको जस्तो छ । तर, उक्त जनावर ऊँट, घोडा वा भेडामध्ये कुनै होइन भन्ने सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ ।
आखिर के रहेछ त यो अचम्मको जीव ? जर्मन भाषामा यसलाई अल्पाका भनिँदो रहेछ । नेपालीमा पनि यही नामले चिनिन्छ ।